Profile Company - RMC Industrial Corporation Co., Ltd
Daawaha beadlock non
Daawaha beadlock dhab ah
Daawaha insert beadlock
Steel beadlock non
beadlock dayashada Steel
Steel beadlock dhab ah
insert Steel beadlock
been abuurtay Beadlock
JILICSAN 8 Beadlock
RMC warshadaha KAMBANI waa xirfad saaraha baaxad weyn oo ka mid ah nooc kasta oo giraangiraha steel iyo giraangirihii daawaha aluminium, iskudhafka horumarka iyo wax soo saarka si wadajir ah. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid steel giraangiraha beadlock aan, giraangiraha beadlock steel iyo beadlock aan giraangiraha daawaha aluminium iyo giraangirihii daawaha aluminium beadlock iyo taayirada, sidoo kale waxaan ku siin karaan qaybo ka mid ah iyo accessories badan ee baabuurta kala duwan.
Shirkadda Our waxaa la aasaasay sanadkii 2008, ka hor inta shirkadda la aasaasay aynu hore u lahaa sanado badan taariikhda warshadaha ee giraangiraha iyo taayirada. Waxay ku taallaa at Ningbo City dhow Shanghai, waxaan ku raaxaysan gaadiidka biyaha ku haboon, hawada iyo dhulka ah.
shaqaalaha shirkada oo dhan aad u yar yar iyo iyada oo loo marayo dadaalka shaqaalaha oo dhan, dadka RMC ayaa si joogto ah isku dayeen in ay hagaajiyaan tayada wax soo saarka, iyo si joogto ah isku dayeen in ay hagaajin lahayn shirkadda ee mabda'a maamul iyo fikrad farsamada. Our awood-soo-saarka sanadle ah waa 2 million giraangirihii.
Currently, RMC waxaa hore u dhoofiyo America, France, Australia, Italy iyo 20 dal oo kale iyo gobolada, iyo sidoo kale, RMC siiyaan fikrado our dib u habaynta loogu talagalay macaamiisha our ee Shiinaha. Shirkadda Our ayaa mar walba diiradda on cilmi, horumarka iyo hal-abuurnimo, iyo in la horumariyo badan oo cusub double beadlock giraangiraha kuwaas oo horey u soo shiriyey macaamiisheena gaari Nissan Y60, Dhuldhoobo, gaari, Raptor, Jimny, Prado iyo wixii la mid ah, oo aad baabuur this ka heli kartaa at our Gallery. Iyo waxyaabaha our loogu talagalay by kooxaha design noo gaar ah, waxaan si joogto ah sameeyaan design badan oo dheeraad ah si ay ula kulmaan macaamiisha u baahan tahay.
RMC bilaabi doonaan wajigii labaad ee istiraatijiyadda horumarinta our. Shirkadda Our tixgeliyo "qiimaha macquulka ah, mar-soo-saarka hufan iyo adeegga wanaagsan ka dib iibka" sida rogo oo. Waxaan rajaynaynaa in ay iskaashi la macaamiisha dheeraad ah horumarinta iyo labada dhinac. Waxaan soo dhawaynaynaa iibsada iman kara in ay nala soo xiriir.
Cinwaanka: No.101, Siming East Road, Yinjiang, Haishu, Ningbo, Shiinaha, 315151